कस्तो मासु खान हुन्छ? कस्तो खान हुँदैन? :: Setopati
कुमार चालिसे काठमाडौं, कात्तिक ६
त्यस्तै मासु काट्ने ठाउँ सफासुग्धर नभए यसले विभिन्न सरुवा रोग समेत निम्त्याउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सानोतिनो कुरामा ध्यान नदिनाले चाडवाडको लगत्तै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यो समयमा धेरैजसो 'फुड प्वाइजन'का बिमारी आउने चिकित्सकहरूको अनुभव छ।
यस परिकार पकाउने विधि हामीले कस्मोपोलिटियन सेफ कुमार चालिसेको सहयोगमा तयार पारेका हौं।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक ५, २०७७, २३:०१:००